Soomaaliya iyo Kenya oo ku heshiiyay in dib loo soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed - Home somali news leader
Home NEWS Soomaaliya iyo Kenya oo ku heshiiyay in dib loo soo celiyo xiriirka...
Soomaaliya iyo Kenya oo ku heshiiyay in dib loo soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed
Shir madaxeedka IGAD ee 38aad ee aan caadiga aheyn ayaa la soo gabagabeeyay, iyadoo Madaxda dalalka IGAD sida Jabuuti iyo Itoobiya ay dadaal u galeen sidii loo xalin lahaa khilaafka dalalka Kenya iyo Soomaaliya.
Madaxaweyne Farmaajo ayaa inta badan Madaxda IGAD ay culeys ku saareen in uu xaliyo khilafka maadaama dowladiisa bilowdey jarida Xiriirka Kenya, waxaana wararka horudhaca ah ee la ee la helay ay sheegayaan in lagu heshiiyey in marka dalalkooda ku laabtaan ay faah faahiyaan heshiiska.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa isu keenay Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, waxaana labada dhinac ka dalbadeen in xiisada qaboojiyaan in hadalada colaada ay warbaahinta isu marin.
Khilaafka diblumaasiyadeed ee u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa aad u xoogeystay labadii todobaad ee la soo dhaafay, waxaana dhaq dhaqaaqyo ay ka socdaan xaduudka labada dal, iyada oo dowladda Soomaaliya ay shalay degmada Doolow ka dejisay diyaarado siday Ciidamo farabadan.
Previous articleWhy does new coronavirus variant cause concern?
Next articleDiblomaasiyiintii Safaaradda Soomaaliya ee Nairobi oo saaka dib ugu laabtay Muqdisho